Dadweynaha Somalida Ogadeeniya oo Yaaban! – Rasaasa News
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya oo Yaaban!
Aug 23, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo
Farta iyo meesha bukta ayaa is ogg, in gumaysi dalkeena haysto ma cid baa diidan, in Ogaden ayna ahayn meesha kaliya ee la gumaysto ma cid baa diidan, in noloshu ka qiimo badan tahay dhimashada ma cid baa diidan, in halgankeeni cidlooday ma cidbaa diidan, waa maya jawaabuhu.
Waxaa xaqiiq ah in wax kasta oo raaga uu xumaado, hase ahaatee xumaanta ayaa kala wanaagsan, wax yaalaha xumaada qaarkood way soo uraan waxaana ka dhasha cuduro dilaa ah oo keena dhibaato [epidemic desease].
Waxaan uga tan lee yahay Kooxda Jwxo-shiil, way soo uraysaa waxayna noqotay cudur ka mid ah cudurada faafa, waxaa daliil u ah calaamadaha aan qarsoodiga ahayn ee maalinba maalinta ka dambaysa ka soo if baxaya kooxda-jwxo-shiil.
Halganka ay ummadi ugu jirto aayo ka tashigeeda waxaa laf dhabar u ah dadweynaha ay ka soo dhex baxday Jabhadaasi, si ay Jabhadu ugu guulaysato halganka ay wado waa in ay haysataa kalsoonida dadweynaha.
Dadweynaha waxaa ka yimaada masuuliyiinta Jabhada, Dhaqaalaha iyo ciidanka dagaalka wada, hadii saddexdaas arimood la waayo waxaa la waayi dhaqdhaqaaqa ay Jabhadaasi wado.
Hadii sifooyinkaas la helo, sidaas waxaa ku taaba gala ama ku guulaysta Halganka Gobonimodoon ee ay umadaasi ku jirto, waxaa khasab ah in la helo dad yar oo la shaqaysta cadowga lala dagaalayo, laakiin waxaa muhiim ah in dadka inta badani ay taageero siiiyaan ururka halganka wada, ururkuna waa in uu kasbadaa dadweynaha.
Hadaba, waxaan bayaaminaynaa bal in ay ka dhex jiraan dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyo Jabhada Jwxo, arimahaas aynu soo sheegnay; Jwxo wixii ka horeeyey 2003 far baa ku godnay waxaana soo baxayey maalinba maalinta ka dambaysa arimahan hoose;
1. Qabyaalad Jwxo-shiil la bilaabatay imaanshihiisii uu yimi ururka Jwxo [cid walbaa ogg waxaana agga tubnaa beeshiisa gaska]
2. Dhaqaale urursi aan nina hore hunguri uga qaban buu Jwxo dhex keenay Jwxo-shiil [Kaah oo uu Taran ka korsameeyey]
3. Dad dhaqasho, maciibada ayuu ummada Somalida Ogadeeniya ka xushaa Jwxo-shiil, si uu ugu dilo dadka wax tarka ummada u leh [Doqomada oo ku dilay Maxamed Sahal, ayuu sida xoolaha u dhaqdaa]
4. Ka Qayb galin halganka Somalida Ogadeeniya Qoysas gaar ah [Qoysas ayaa u badan kooxda Jwxo-shiil]
5. Isbadal diid iyo Kali talisnimo [Xukun jacayl waaka halkaas dhigay Jwxo]
6. Hanjabaad, dadka sheega khaladka Jwxo-shiil, gudo iyo dibadba [cidii uu u arko in ay ka horjeedo wuxuu amri in la dilo Dr. Dolal]
7. Ka hor istaaga halganka ururada kale ee la dagaalamaya cawoga gumaysta dalka [JXSG isaga ayaa ka hor jooga in ay Itobiya xabad ku rido]
8. Iska horkeenka dadweynaha dibad iyi gudaba [qabyaalada loo kala fadhiyo isaga ayaa masuul ka ah]
9. Dilka Masuuliyiinta uu is lee yahay, waxay keeni karaan isbedel muuqda [Jamaal dheere, Dr. Dolal, isku day dil Maxamed Sahal]
10. Hoos u laynta N/hurayaalka qoriga sida [Inta gumaysigu dilay inta Jwxo-shiil dilay ayaa ka badan]
11. Caruur iyo Haween dibadaha jooga calaamado u dhiibka [dalalka reer galbeedka bal dhugo]
Arimaha Jabhad wanaagsan oo guulaysan karta looga baahan yahay waa kuwa aan kow sheegnay, waxaana kuwaas lid ku ah, kuwa hoosyaal oo kuligood ay ku dhaqmaan kooxda Jwxo-shiil.
Kooxda Jwxo-shiil, ayena jirin haba yaraatee cid wanaag u haysa xumaan mooyee, taas macnaheedu waxaa weeye ummada Somalida Ogadeeniya waxay jeceshahay horumar laga gaadho halganka ummada, kaas oo uu Jwxo-shiil mudo badan doonayey in xabaalo si uu xoolo uga helo gumaysiga.
Jwxo-shiil iyo kuwa la socda oo ay afka kaga hadhay ayaa waxaa ay ummada Somalida Ogadeeniya u taqaan halgan dumisyo, waxayna caan ku noqdeen dagaalka qarsoon ee ay kula jiraan dadweynah si aan la fahmaynin.
Kooxda Jwxo-shiil, oo aad u sii dabo go,aysa ayaa waxay hada maraysaa meeshii ugu dambaysa iyada oo isugu dhiibtay dadweynaha Somalida Ogadeeniya, ee degan dibadaha oo haatan qoolal isu haysta, ayna kala dhimashadoodu meel xun marayso.
Waxaa isweydiin leh ummad iyada oo kaligeed ah oo aan maamul yeelan, mindiyaha isu haysata ma suurto galbaa in ay halgan gobonimodoon ku guulaysato?
Jwxo-shiil, oo Wadna Xanuun ku Soo Booday [heart attack]
Jwxo-shiilo oo ku Guulaystay in ay Difaacaan Baha Cabdile